အဖွား နာမည်က ဒေါ်တင်တင်လှတဲ့ ရဲမှူးကတော်ကြီးပေါ့ ပြည်မြို့လယ် မှာ တိုက်ကြီး ၂ လုံးတောင် ပိုင်တာရယ်…. – Na Pann San
အဖွား နာမည်က ဒေါ်တင်တင်လှတဲ့ ရဲမှူးကတော်ကြီးပေါ့ ပြည်မြို့လယ် မှာ တိုက်ကြီး ၂ လုံးတောင် ပိုင်တာရယ်….
အဖွားနာမည်က ဒေါ်တင်တင်လှ တဲ့…ရဲမှူးကတော်ကြီးပေါ့…ကတော်ပီပီ ရုပ်ချော အပြောကောင်း ပေါင်းတတ် သင်းတတ်… ပြည်မြို့လယ် မှာ တိုက်ကြီး နှစ်လုံးတောင် ပိုင်တာရယ် သားသမီး မထွန်းကားခဲ့တော့ အဖွားအမျိုးသား ရဲမှူးကြီးဆုံးတော့ အဖွားက တူတွေ ၊ တူမတွေနဲ့ နေတာ ရယ်…
ဒီ လိုနဲ့ အဖွား ချော်လဲ ပေါင်ကျိုးတော့ အဖွား ရဲ့ တူတွေ တူမတွေက အဖွားကို အခန်းတစ်ခုထဲ ထည့်ထားပြီး ထမင်းတောင် အဝကနေ ခွက်ခေါက်ကျွေးတာရယ်…အဲ့လောက် ထိတော်တာ…
အဖှားနာမညျက ဒျေါတငျတငျလှ တဲ့…ရဲမှူးကတျောကွီးပေါ့…ကတျောပီပီ ရုပျခြော အပွောကောငျး ပေါငျးတတျ သငျးတတျ… ပွညျမွို့လယျ မှာ တိုကျကွီး နှဈလုံးတောငျ ပိုငျတာရယျ သားသမီး မထှနျးကားခဲ့တော့ အဖှားအမြိုးသား ရဲမှူးကွီးဆုံးတော့ အဖှားက တူတှေ ၊ တူမတှနေဲ့နတော ရယျ…
ဒီ လိုနဲ့ အဖှား ခြျောလဲ ပေါငျကြိုးတော့ အဖှား ရဲ့ တူတှေ တူမတှကေ အဖှားကို အခနျးတဈခုထဲ ထညျ့ထားပွီး ထမငျးတောငျ အဝကနေ ခှကျခေါကျကြှေးတာရယျ…အဲ့လောကျ ထိတျောတာ…
သံသရာအဆကျဆကျ စိတျရှိတိုငျး ပေးလှုနိုငျသူဖွဈရပါစေ…သံသရာမှာ ပုံ့တို့ ပွနျဆုံခဲ့ရငျ ကြေးဇူးခံ ကြေးဇူးစားအဖွဈ မဆုံဘဲ…ရစေကျကွောငျ့သာ ဆုံရပွီး သာသနာ အတူပွုကွတဲ့ မိတျဆှကေောငျးတှအေဖွဈ ပွနျဆုံပါရစနေောကျဆို ခိုလှုံရာကို လာလှုရငျ အပွုံးလေးနဲ့ ရီစရာတှေ ပွောပွီးနှုတျဆကျမယျ့အဖှား မရှိတော့ဘူး…အလှမျးပွသှေားကွညျ့ဖို့ အုတျဂူလေးတော့လုပျထားတယျ…ပုံ့ ပွုသမြှ အမြှ…အမြှ…အမြှ ပါ အဖှားရေ…
” တိကျခိုင်မာသော အချက်အလက်များ အခြေခံ ၍ ကျောင်းများ ဖွင့်ရန် ဆုံးဖြတ်ပါ.. ဆင်ပါးစပ် နှမ်းပက်ရုံမျှ ဓာတ်ခွဲ စစ်ဆေးမှုနှင့် အရဲမစွန့်ပါနှင့်….”
နောက်ဆုံးတော့ ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်ပါပြီ (တနိုင်ငံလုံး ကျောင်းဖွင့်မယ့်ရက်ကို ကြေငြာပြီ)
ချစ်တဲ့သူနဲ့ လက်ထပ်လိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ကြေငြာလိုက်တဲ့ ဒေါက်တာ မြတ်ဝတ်ရည်